​कांग्रेसलाई अझै डुबाउँदै देउवा
डा. गोविन्द केसीपछि सभामुखको मुद्दा
Tuesday, 31 Jul, 2018 1:53 PM
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा झण्डै साढे सात दशक नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेको नेपाली कांग्रेस अहिले भूमिकाशून्य अवस्थामा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र आदर्शअनुरुपको संविधान जारी भएर जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएपछि नेपाली कांग्रेस किन भूमिकाबिहिन हुन पुग्यो ? यो पार्टीको वर्तमान र भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने नेता र कार्यकर्ताहरुलाई अहिले यो प्रश्नले ज्यादै पिरोल्ने गरेको छ । नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रजातन्त्रवादी कानून व्यवसायीहरुको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोशियसनको दशौं महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दा पनि यो विषय गम्भीर ढंगले उठाए । कांग्रेसका युवानेता गगन थापाले गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा आएदेखि नै भनिरहेको छ, कांग्रेसको नीति र सिद्धान्तको विजय भएको छ र नेतृत्वले हारेको छ । हारको कारण खोतल्नु पर्दछ । र जिम्मेवार पदाधिकारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ भन्ने माग आजपयन्त उठिरहेको छ ।तर संस्थापनले यसलाई त्यतिकै गम्भीर ढंगले लिन सकेको छैन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सो सम्मेलनमा अन्तरघातका कारण पार्टी हारेको रेडिमेट जवाफ दिएर टारेका छन् । सभापति देउवा र देउवा गुट यही अन्तर्घातको आरोप लगाएर पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीलाई सखाप पार्ने दाउमा छन् । पार्टीलाई पूर्व अवस्थामा पुर्याएर मात्र राजनीतिक विश्राम लिने देउवाको हेटौडाको प्रतिबद्धता गैंडाकोटमा दोहोरिएन । आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्म पार्टीलाई सबल बनाउने विश्वास उहाँले पार्टीभित्रकै फोरमहरुमा पनि दिन सकेको छैन । कार्यक्रमविना त्यस्तो प्रतिबद्धता प्रकट गरेकै भए पनि त्यसलाई पत्याउने आधारचाहिँ थिएन ।
२०७४ को चैत्र ९ देखि २०७५ को बैशाख १६ सम्म चलेको पार्टीको केन्द्रीय समितिले भाद्र महिनामा महासमितिको बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर संस्थापनले अझै तिथि मिति निर्धारण गरेको छैन । सभापति देउवामा स्मरण शक्ति क्षीण हुँदै गएको छ कि उनले आफ्नो पार्टी संयन्त्र र औपचारिक र अनौपचारिक सल्लाहकारलाई परिचालन गर्न सकेको छैन कि पार्टी संयन्त्र वा तथाकथित भित्रिया र सल्लाहकारहरुले नै देउवालाई विश्वास गर्न छाडिसके यी प्रश्न अहिले कांग्रेसवृतमा उठ्न थालेका छन् । असार महिनाको ५ गतेदेखि ८ गतेसम्म हेटौडामा भएको पार्टीका जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा सभापति देउवाको कार्यशैलीका बारेमा देउवाकै भनिएका सभापतिहरुले पनि कटु आलोचना गरेका थिए । त्यसपछिका एक महिनाभन्दा बढीको समयावधिमा सभापति देउवाले पार्टी संगठनमा गरेको योगदान भनेको केही थान सदस्यहरुको मनोनयन र पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सभापतिको नियुक्ति हो । प्रतिष्ठानको सभापतिको जिम्मेवारी सभापतिले देउवाले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई सुम्पिएको छ र उपसभापति निधिले प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुखमा प्राध्यापक, पत्रकार, अधिकारकर्मी तथा साहित्यकार पुरुषोत्तम दाहाललाई नियुक्त गरेका छन् ।
पार्टी उपसभापति निधिप्रतिको उनको मोह किन बसेको छ ? यो बुझिनसक्नु छ । अधिक महत्वाकांक्षी निधिले आफूलाई पार्टीको आगामी महाधिवेशनको सभापतिको उम्मेदवारको रुपमा पनि प्रस्तुत गरेका छन् । तर सर्लाहीबाट निर्वाचन क्षेत्र सरेर धनुषा पुगेका राजेन्द्र महतोसँग पराजित भएपछि धनुषामा नै उनको अवस्था कमजोर बनेको छ । गत बर्ष भएका निर्वाचनमा जनकपुर उपमहानगरपालिकामा समेत उनले आफ्ना मेयर उम्मेद्वार जिताउन सकेनन् । जिल्लाका पुराना हस्ती आनन्द ढुंगाना र मैया कोइरालासँग उनको सम्बन्ध राम्रो छैन् । पूर्व राष्टपति डा. रामवरण यादव र रामकृष्ण यादवसँग पनि उनको सम्बन्ध राम्रो छैन् ।
पार्टी अध्यक्ष भएको दुई बर्षसम्म उनले पार्टीका विभाग र समितिहरुको गठनमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । राजनीतिक पार्टीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने संगठन विभागको गठन विना गत बर्ष पार्टी चुनावमा होमियो । पार्टीको अवस्थामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सन्देश पहिलो चरणको स्थानीय चुनावले दिएकै थियो । तर उनले कानमा तेल हालेर बसे । माओवादीसँग मिलेर एमाले एक्ल्याएपछि सत्ताको आसनमा सधैँ बस्न पाइन्छ भन्ने उनको सपना माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने एकै निर्णयले भताभुंग हुन गयो ।
कांग्रेस सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिसक्नुभयो, सदस्यहरु भरिराख्नुभएको छ । तर त्यसले पनि उनको कार्यसम्पादनमा कुनै सुधार ल्याएको छैन् । उनले तिनै ब्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, जो उनलाई सुझावसम्म दिन डराउँछन्, उनीले काम गरे पनि ठीक, नगरे पनि ठीक भन्ने अन्धभक्तहरुको जमात सिर्जना गरेर कांग्रेस उँभो लाग्ने अवस्था छैन । पार्टीको अवस्थाको विश्लेषण गर्न सक्ने विपक्षीका नीति, कार्यक्रम, विचार र व्यवहारलाई केलाउन सक्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताको आवश्यकता र चाहना बुझेर पार्टीका आगामी रणनीति र कार्यक्रम बनाउन सक्ने व्यक्तिहरुलाई उनले सोध्न र खोज्न सकेका छैनन् । परिणाम समयको चक्र जति घुमे पनि कांग्रेसका कार्यकर्तालाई एकत्रित र संगठित गर्ने गर्दै सिर्जनात्मक कार्यमा लगाउने कार्यक्रम पार्टीले दिन सक्ने अवस्था उत्पन्न हुन सकिरहेको छैन् । उनको नेतृत्व ऐतिहासिक रुपमा नै असफल हुँदै गएको छ ।
पार्टीको आफ्नो सुस्पष्ट नीति र कार्यक्रम नभएकोले नेपाली कांग्रेसका सांसददेखि सामान्य कार्यकर्ताहरु क्षणिक घट्नामा प्रतिक्रिया दिएर पार्टीको अस्तित्व जोगाउन विवस छन् । डा. गोविन्द केसीको अनशन कांग्रेसको नीति, रणनीति र कार्यक्रम केही होइन । सरकारले आफूसँग गरेका पूर्वसहमतिको पालनाको लागि डा. केसी अनशन बसे, कांग्रेसले त्यसमा सदनदखि सडकसम्म प्रतिक्रिया जनायो । जब डा. केसीसँग सरकारले सहमति गर्यो, कांग्रेस सदनदेखि सडकसम्म एजेण्डाबिहीन बनिहाल्यो । क्षणिक घट्नामा प्रतिक्रिया जनाएर पार्टी चल्दैन । यसको आभाष कांग्रेस सभापति देउवा र उनका अन्ध समर्थकहरुलाई अझै भैसकेको छैन । अहिले फेरि सभामुख, उपसभामुख चाहियो भनेर रोइलो गरिएको छ । यो पनि कुनै मुद्दा होइन ।
पार्टीलाई जीवन्त बनाउन, पार्टीलाई जनताको बीचमा लोकप्रिय बनाउन, पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई स्वयंसेवी भावनाले जनताको सेवामा समर्पित हुन लगाउन पार्टीमा सच्चा, इमान्दार, सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ । उनका वरिपरी सबै गन्हाएका र असक्षमहरुको घेरा छ, यसले देउवालाई बुढानीलकण्ठको डेराबाट बालुवाटार पुर्याउने हैसियत राख्दैन । बदनाम र भ्रष्ट व्यक्तिले इमान्दार र सदाचारी कार्यकर्तालाई काममा लगाउनै सक्दैन । पैसाका लागि जे पनि गर्ने उनको बिग्रेको छविमा त्यसै कार्यमा सहयोगी बन्नेहरुलाई अगाडि सारेर सुधार हुन सक्दैन । उनले बनाएको संयन्त्रले पार्टीलाई जोड्नुको सट्टा झन विभाजित गर्ने मौकामा पेलेर बदला लिने अवस्था सिर्जना गर्न खोज्दैछ ।
यसैले कांग्रेसमा वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी शुरु भएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, डा शेखर कोइरालाले आफूलाई त्यसअनुरुप तयार पारे आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व उनमा सर्छ । खुट्टा कमाए भने जसले दह्रो खुट्टा टेक्छ, नयाँ व्यक्ति भएपनि उसले नेतृत्व लिन सक्छ । किनकी वर्तमान नेतृत्व जसले आजसम्म कुनै आशा देखाउन सकेन, सत्ताको नेतृत्व गर्दा समेत देश र जनताको हितमा काुनै काम गर्न सकेन, त्यसले बाँकी अवधिमा गर्ने कुनै संभावना छैन । सभापति देउवाको कार्यकाल खराब प्रदर्शनबाट शुरु भएको र सुखद् नतिजा आउने सम्भावना लगभग शून्य नै छ ।